I-CAMEROON: "I-Wimli" idumela elimangazayo lomuzi waseMalmalm - AFRIKHEPRI FOUNDATION
UMLANDO OTHIWE KANYE NOKUQALA,
I-CAMEROON: "I-Wimli" idumela elibi lomuzi waseMalmalo
By UChristophe Nyemeck Beat ngoJanuwari 10, 2020
Isithombe: Downtown Town Mbalmayo
Igama elithi "Wimli" (idwala lokufa), elinikezwe eMalmalmayo elitholakala ngamakhilomitha angamashumi amane nanhlanu ukusuka eJaoundé, edwaleni lale ndawo yaseNongong neSo'o, esifundeni esisemaphandleni, eCameroon, sibheke ukuphelelwa yimemori eqoqweni yabantu abakuleli dolobha, okubonakala kubalulekile ukukhohlwa indaba ebuhlungu ehlobene nayo.
Izizukulwane ezintsha, ikakhulukazi lezo zeminyaka eyizinkulungwane ezimbili, azi ukuthi lolu daba ludolobha lwaseMalmalo; namanje kancane incazelo yalo.
Igama elithi "Mvimli" livela kwezenzakalo ezibuhlungu zangalolo European umsebenzi isikhathi (German nesiFulentshi), olusha encwadini City Unonya ka-Aleksandru Biyidi Awala, intatheli nomlobi, ongowokuzalwa Nyong futhi So'o. Kuleli dolobha elingokomlando uye muva imakwe ngokufa sokudubula kumugqa le Icebo lika kuhlulekile-April 6 namakhulu ayisishiyagalolunye namashumi ayisishiyagalombili six.Alexandre Biyidi Awala, ezisola inkumbulo, yazalwa ngo-Akom Etamu (translation French : idwala lamanzi), elitholakala ngamakhilomitha ayishumi ukusuka ku-wimli, futhi lihlala emiphakathini yesikhathi sokusebenza. Ngo izincwadi kwakhe eshicilelwe ngaphansi komthetho mbumbulu Mongo Beti eveza ukweqisa kwenqubomgomo wamakoloni kwaleso sikhathi, kuhlanganise ngokuphazamisa imigomo kwezohwebo ophakathi nabathengisi futhi abathengi izifiki owabeka amanani at ngentando, kanye ukuvuswa okuvame ukuphela kokudubula noma ukubulala ... Inzalo yabasindile yale nkathi yamakholoni ithi "ekukhunjweni kwe-sub-prefecture yamanje, ngaphambi kokuthunyelwa koMnyango Wezolimo, kukhona khona Kwakukhona izibhamu ezimbili abadubuduli abadubule ngazo, futhi abalahlwe ukufa, nokuthi kukhona igazi elinengi elahlekelwa eMalmayo ngaleso sikhathi.
Namuhla izakhamuzi zedolobha laseMbalmayo zibukeka ziphendukile leli khasi elinonya lomlando walo futhi zikhathazekile ngesimo sayo sezomnotho esiye sawohloka usuku ngalunye lwenzuzo. Idolobha lase liyisiqalo somsebenzi wezomnotho okhungethe emakethe enkulu e-cocoa kanye nekhofi, kanye nendawo enkulu yezinhlaka zezinkuni zezinkampani zehlathi. Namuhla ukungazinzi kwentengo yekhilimu yekhofi noma i-cocoa, futhi ukuvalwa kwezinkampani zehlathi kuboniswe kakhulu kulo muzi. Amathuba amasha omsebenzi nokuqashwa kabusha emsebenzini akubonakali.
Ungacabangi, idolobha lamadwala liye lagcina ubuhle balo basendulo, elichazwe ezungeze impahla yalo yabantu kanye nemvelo. I-quarry enkulu edlulisa umuzi waseMalmalmayo inikeza umbono oyingqayizivele we-panoramic. Siyabona ukuthi iMalmayo igubungulwe ngamadwala oMfula iNong ehlukanisa umuzi kabili: Oyack, neDolobha elisha lapho lakhiwa khona ibhuloho elisha lomuzi.
Ibhuloho elidala eliphakathi kuka-Oyack noNkong-si manje liyisikhumbuzo somlando ngenxa yobudala balo. Yakhiwa ngesikhathi sokusebenza kwe-Federal Republic Germany (FRG); ihlala ivulekile kubahamba ngezinyawo, izithuthuthu zamabhayisikili nezinqola zamathani ayisithupha.
Amanzi aseNyong, ngaphezu kwamadwala, asele agcwele iKanga, inhlanzi ethandwa kakhulu ngabantu bendawo futhi ibe yinto ekhethekile yezolimo kulesi sifundazwe. Idliwe kahle esitsheni sendabuko esivame ukubizwa ngokuthi "iNdomba Kanga". Futhi ukuphila kuqhubeka ...
Usuke usabela "I-CAMEROON:" I-Wimli "inhlamba embi ye-..." Imizuzwana embalwa edlule